instagram/red.asmr ယနေ့ခေတ်မှာ ASMR ဗီဒီယိုတွေဟာ YouTube ပေါ်မှာ အရမ်းပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ASMR ဗီဒီယိုတွေဆိုတာ စားကောင်းသောက်ဖွယ် အစားအသောက်အမျိုးမျိုးကို မြိန်ရေယှက်ရှည်စားပြတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ခေါ်တာပါ။ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီ ASMR ဗီဒီယိုတွေဟာ စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုကို တနည်းတဖုံပြေပျောက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ASMR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ကိုတော့ Brightside ကနေတဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ASMR ရဲ့ နာမည်အရှည်ဟာ Autonomous Sensory Meridian Response ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဇီဝဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုပါ။ စာဖတ်သူဟာ ဦးနှောက်ကို ကျေနပ်စေတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်လိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကြားလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုပဲ ASMR လို့ခေါ်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ […]
Shutterstock ကိုယ့်မှာခွေးတစ်ကောင်မွေးထားပြီး အဲဒီ ခွေးလေးက ကိုယ့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်လုပ်နေလို့ သူကိုယ့်ကို သံယောဇဉ်တွယ်နေတယ်လို့ မထင်လိုက်ကြနဲ့ဦးနော်။ တကယ်တော့ ခွေးတွေက သူတို့ရဲ့သခင်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လက်ခံကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား၊ တကယ်သဘောကျရဲ့လား၊ သခင်နဲ့နေရတာ လုံခြုံရဲ့လားဆိုတာ အရင်ဆုံးလေ့လာကြပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခွေးဆီမှာ ဒီလိုအချက်တွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင် သူက သင့်ကို သဘောမကျဘူး၊ မယုံကြည်သေးဘူး ဆိုတာ ပြနေတာပါတဲ့နော်…။ (၁)။ သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို လိုက်ကြည့်နေတယ် သင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန် သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို သူ လိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ထဲမှာ ထင်မိမှာက “ဒီခွေးလေးဟာ ငါ့ကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်ဘူး” ဆိုတာပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ခွေးလေးတွေက သူတို့အနားမှာရှိနေသူတွေကို မယုံတဲ့အခါ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတတ်ပြီး ဘယ်လို လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို မဆို အလွတ်မပေးတတ်ပါဘူး။ […]
Freepik/TPF ဘဏ်နဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေ တိုးတက်လာတဲ့ လက်ရှိခေတ်မှာ လူအတော်များများဟာ Credit နဲ့ Debit Card တွေ အသုံးပြုလာကျပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Card တွေ အသုံးအပြုပဲ ငွေသားသက်သက်ကိုပဲ ကိုင်တွယ်ပြီး အသုံးပြု နေတဲ့ လူတွေ အများအပြားလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ Credit နဲ့ Debit Card တွေ အသုံးပြုလို့ ရရနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ၊ ခံစားခွင့်တွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ ခံစားခွင့်တွေလည်းဆိုတာ Shwemom ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit Card ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ (၁) Credit Card ဆိုတာ ဘဏ်ဆီကနေ ချေးယူထားတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ တစ်ခုကို Card ထဲထည့်ပြီး […]
ရေဆင်းပိုက်အပေါက် မပိတ်အောင် ဒီလိုအရာတွေဆို ရေဆင်းပေါက်ထဲ မထည့်သင့်ပါ….
pexels/ Kaboompics .com အိမ်တွေမှာ ဘေစင်က ရေဆင်းပေါက်တွေ ပိတ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ သိပ်စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ကရိကထများသလို တစ်ခါတစ်လေ ပိုက်ပြင်သမားခေါ်ပြင်ရတာလည်း ဈေးကြီးပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အိမ်ထဲက ဘေစင်မှာ အညစ်အကြေးတွေစုပြီး ဂျီးမပိတ်ရလေအောင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အရာတွေကို ရေဆင်းပိုက်အပေါက်ထဲ လောင်းမထည့်မိစေဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ Asiaone သတင်းဌာနကနေတဆင့် ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥခွံများ ကြက်ဥခွံတွေကို ကြေမွအောင် ချေပြီးမှ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်လိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥခွံတွေရဲ့ ရှထက်တဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေဟာ ရေဆင်းပိုက်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ အခြားအရာတွေနဲ့ ကပ်ငြိနိုင်ပါတယ်။ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ရေဆင်းပေါက် ပိတ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ pexels/Kaboompics .com ဂျုံမှုန့်များ ဂျုံဟာ ရေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ နို့နှစ်လိုမျိုး အနှစ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ […]
အိမ်သာတက်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်
Shutterstock-Brian A Jackson သင်စိတ်ညစ်နေပါသလား? ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေပါသလား? ဒီလိုစိတ်တွေအရမ်းညစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင် တစ်ခြားဘာကိုမှ မစဉ်းစားနေပါနဲ့။ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့လည်း မကြိုးစားနေပါနဲ့။ အဲဒီလိုအချိန်တွေကျရင် လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဟာ ရှုပ်ထွေးနေလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးရောက်ရင် အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်ကို အေးအေးထားပြီး အိမ်သာတက်လိုက်ပါ။ Pixabay-chriskeller အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဘော့စတွန်မြို့ရှိ ဆေးပညာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Beth Israel Deaconess Medical Centre ကနေပြီးတော့ အိမ်သာတက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကတော့ အိမ်သာတက်တဲ့သူတော်တော်များများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Shutterstock- Brian A Jackson လူတော်တော်များများဟာ အိမ်သာတတ်တဲ့အချိန်ကြရင် ညှစ်အားကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအချိန်ကြရင် ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ ဟိုမုန်းတွေ ထွက်လာလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းတွေက လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံအား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော၊ […]
မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကြားမှာ သိုးမည်းတစ်ကောင်ဖြစ်ရခြင်း ကောင်းကျိုး (၅) ခု
Imdb/TheJudge မိသားစုတစ်စုထဲမှာ ကိုယ်က တခြားလူတွေနဲ့ မတူဘဲ သီးသန့်ခွဲထွက်နေရင် မိမိကိုယ် သူကတော့ သိုးမည်းပါကွာလို့ ခဏ ခဏ ညွှန်းဆိုတတ်လေ့ရှိကြတာပါ။ ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာပဲ ကိုယ်က တခြားသူတွေနဲ့မတူညီဘဲ သီးသန့်တစ်ဘာသာဖြစ်နေရင် သိုးမည်းလို့ တံဆိပ်အကပ်ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ သိုးမည်းတွေမှာ သိုးမည်းဖြစ်ရတာ ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမလဲ၊ ဘာကောင်းကျိုးတွေရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ – လြတ္လပ္တယ္ သိုးမည်းဖြစ်ရတာရဲ့ ကောင်းကျိုး နံပတ်တစ်ကတော့ လွတ်လပ်ခြင်းပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကိုဖြစ်သူ-အစ်မ ဖြစ်သူတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု၊ ကိုယ့်မိဘအသိုင်းအဝန်းတွေကြားမှာ သတ်မှတ်ထားခြင်းခံထားရတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ သိုးမည်းတစ်ကောင်က လွတ်လျွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ပြုမူလို့ရတာပါ။ ကိုယ့်ရှေ့က ညီအကိုမောင်နှမတွေက ဘာကြီးဖြစ်လို့ ကိုယ်လည်း ဘာကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ တကယ်တော့ ငြီးငွေ့ပျင်းရိစရာကောင်းလှပါတယ်။ သိုးမည်းတစ်ကောင်ဖြစ်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်ကေတာ့ အဲဒါတွေ ကင်းလွတ်ပြီး မိမိဖြစ်ချင်ရာ-မိမိဖြစ်ချင်တာကို အနှောင်အဖွဲ့မရှိ ပြုလုပ်နေထိုင်လို့ရတာပါ။ The BigBang […]
အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန် ဘဝအတွက်လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အချက် (၅၀)
[email protected] ဘဝရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဲကုန်ဆုံးကြတော့မလို့လား။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝကြီးမှာ နေရတာတန်အောင်လို့ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဖြစ်သွားစေမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပတယ်။ အဲဒါကတော့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အချက် ၅၀ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက် ၁၀၀ ထဲ လက်ရှိ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်နချက်များ ပြုလုပ်ပြီးပြီလဲ၊ ဘာတွေများ လုပ်ဖို့ကျန်ဦးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။ (၁) ဒီနေ့ပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် တိတ်တိတ်လေး တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံတိတ်တိတ်လေး ပေးတာတို့၊ လက်ဆောင်ပို့ပေးတာတို့၊ အလှူလုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ (၂) ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံရှင်းဖို့တန်းစီနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရှေ့ကလူဝယ်ထားသမျှတွေကို ပိုက်ဆံရှင်းပေးကြည့်ပါ။ (၃) အမှားကြီးကျူးလွန်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်ကြည့်ပါ။ (၄) တစ်လလုံးစာ စုငွေကို မစုဘဲ အလှူလုပ်ကြည့်ပါ။ (၅) ကလေးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အချိန်ပေးပြီး စကားပြောရင်း သူတို့ကို ရင်ဖွင့်ပါစေ။ (၆) ဘာကြောင်းပြချက်နဲ့မှမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူပါ။ တစ်နေကုန်အိပ်ပါ။ […]
မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံအများကြီး မကုန်ရအောင် သတိပြုဝယ်ယူသင့်တဲ့ ပစ္စည်းများ
pexels/Malidate Van ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ရောင်းချတဲ့အခါတိုင်း ပို့ဆောင်ခ၊ ကြော်ငြာခ၊ အခွန်အခဖိုးတွေပါတွက်ချက်ပြီး ရောင်းသူတွေက ဈေးတင်ထားကြပါတယ်။ ဝယ်သူတွေကလည်း ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ ပစ္စည်းဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးဝယ်ကြပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ သာမန်ပစ္စည်းတွေကို မလိုအပ်ပဲ ဈေးကြီးပေးပြီး မဝယ်မိအောင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ Brightside ကနေ ကောက်နုတ်တင်ပြထားတာပါ။ pexels/Skitterphoto လေဆိပ်နဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရောင်းချတဲ့ စားသောက်စရာများ သုတေသနတစ်ခုအရ လေဆိပ်မှာရောင်းချတဲ့ ကော်ဖီနဲ့ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေဟာ ပုံမှန်ထက် အများကြီးပိုဈေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ စားသုံးသူတွေမှာ အခြားရွေးချယ်မှု ကြီးကြီးမားမားမရှိတာကို သိတဲ့အပြင် ရောင်းချတဲ့အစားအသောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ဈေးတွေပိုတင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ခရီးသွားတွေကတော့ လေဆိပ်မှာ ဗိုက်ဆာရင် စားဖို့ အိမ်မှာကတည်းက မုန့်တွေ ကြိုဝယ်ပြီး […]
သင့်အိမ်မွေးကြောင်ကလေးက သင်အိမ်ပြန်လာချိန်ကို ကြိုသိနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း
pexels/pixabay ကြောင်တွေကို အမှီခိုကင်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအဖြစ် သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့သခင်တွေကို ချစ်ကြောင်း နှစ်သက်ကြောင်း ပြတတ်ပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ မွေးတာဟာ တရုတ်နိုင်ငံက စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်လာမှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကိုက်ဖြတ်သတ္တဝါတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အပျက်အစီးတွေဟာ ကြောင်လေးတွေကြောင့် လျော့ပါးသွားရာကနေ ကြောင်တွေကို အိမ်တွေမှာမွေးလာကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကြောင်မွေးတဲ့ဓလေ့ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလည်း ကြောင်ချစ်သူအရေအတွက်ဟာ အများကြီးရှိလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်တွေကို သွေးအေးသတ္တဝါတွေအဖြစ် မှတ်ယူကြပေမယ့် သူတို့မှာလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် တစ်ဖက်သားကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြောင်းပြတဲ့ အမူအရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ pexels/ Bekka Mongeau အောက်ဘက်မှာတော့ သခင်အိမ်ရောက်ပြီလား မရောက်သေးဘူးလားဆိုတာကို သိနိုင်စွမ်းတဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကို brightside က တဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေဟာ […]